🥇 ▷ Farxad, DOCs iyo TEDs: Nidaamka Bixinta Degdega ah ee ay bilaabayaan Baanka Dhexe ✅
Farxad, DOCs iyo TEDs: Nidaamka Bixinta Degdega ah ee ay bilaabayaan Baanka Dhexe
Xawaaladda Bangiga ayaa ku dhowaaneysa inay ku hesho isbeddel qurux badan halkan suuqa Brazil – maalmo ka hor Bangiga Dhexe wuxuu shaaca ka qaaday inuu sameynayo nidaam lacag bixin degdeg ah oo loogu talagalay suuqa gudaha oo loogu talagalay Beddel TED iyo DOC ee horey loo yiqiin.
Fikradda ayaa ah in warku u shaqeeyo shaqsi qof ilaa qof (iyada oo aan dhexdhexaadiye lahayn) isla markaaba – taasi waa, wax aan ka badnayn inaad sugto saacado yar ama maalinta ku xigta ee ganacsiga – oo shaqeynaya 24 saacadood maalintii iyo toddobada maalmood ee usbuucii.
Go’aanka lagu horumarinayo nidaamka cusub, dhowr bangi iyo Fintechs waxay awoodi doonaan inay kor u qaadaan moodooyinka ganacsigooda iyagoo soo bandhigaya badeecado iyo adeegyo ku habboon oo sii kordhaya.
Qaabka xawaaladaha hadda socda, lacag-bixintu waa inay maraan kanaalada bangiga, inta badan waxay abuuraan marka lagu daro khidmadaha dheeriga ah sugitaan aan loo baahnayn, iyo xaddidaadaha ay ka shaqeyn karaan oo keliya maalmaha shaqada laga bilaabo 6:30 illaa 17h.
Nidaamka bixinta degdegga ah “wuxuu ku dilaa laba shimbirood hal dhagax”, yareynta lacagaha canshuuraha iyo qiimaha macaamiisha (noqo mid shaqsi ahaaneed ama shirkad ahaanba) oo hoos u dhig geedi socodka.
Alaabada tafaariiqda sidoo kale isbedelku wuxuu ku kacayaa qiime hoose oo khidmad ah markay lacag ka helayaan kanaalada qaarkood.
Sida ku xusan BC, aasaasida ganacsigu waxay u baahan doontaa oo keliya lambar aqoonsi oo gaar ah si loogu oggolaado macaamiisha inay u akhriyaan iyagoo adeegsanaya taleefannadooda casriga ah – Waxay ka koobnaan doontaa macluumaadka lagama maarmaanka u ah gudbinta si dhakhso leh.
Bixinta Dhameystiran ee Hay’adda looma baahna in la galo macluumaad aad u badan sida bangiga qaataha, laanta, akoonka, iyo nambarka sooshiyal sekuuriti; qalliinka, sida ku xusan BC, wuxuu noqon doonaa “sida ugu fudud ee xulashada xiriiriye buugga taleefanka”.
Si loo isticmaalo lacag-bixin deg-deg ah macaamilku wuxuu u baahan doonaa marka lagu daro taleefanka casriga ah, koonto leh adeeg bixiyaha adeegga lacag bixinta (PSP) iyo barnaamij:
Kaydinta macluumaadka boostada ayaa kuu oggolaaneysa inaad ku bixiso lacagaha hab dareen leh oo fudud, adoo si ammaan ah u adeegsaneysa macluumaadka si fudud loo yaqaan sida lambarka taleefanka ama cinwaanka iimaylka.